Mvura yegungwa flake chando muchina - Shenzhen Herbin Ice Systems Co, Ltd.
Mvura yegungwa flake chando muchina unoshandiswa pane hove hove. Inogona kugadzira mvura yegungwa kuita munyu echando mazaya echando zvakananga.
Mvura yegungwa flake echando michina yakanyatsogadzirirwa kugadzirwa kwechando muchikepe chehove. Iwo ari zana muzana anopesana-nekukanganisa kumvura yegungwa kana mhepo yegungwa.
Vagadziri vavo vanofanirwa kuve vakangwara zvakakwana kuti iite iumbane sezvinobvira kuti igone kukodzera nzvimbo shoma muhove yekuredza.
Iyo inokwana renji yemvura yegungwa flake echando michina anobva ku1T / zuva kusvika 20T / zuva.
1T / zuva remvura yegungwa flake chando muchina
Matani 1 paawa makumi maviri nemana
3T / zuva remvura yegungwa flake chando muchina
5T / zuva remvura yegungwa flake chando muchina
10T / zuva remvura yegungwa flake chando muchina
20T / zuva remvura yegungwa flake chando muchina
Heano makuru mabhenefiti eangu flake echando michina.
Kunyanya yakagadzirirwa kushanda mugungwa mamiriro.
Compressor yakagadzirirwa tangi yakakosha yemafuta, uye muchina wecompressor mafuta kutenderera iri mushe mukuzunza- kusimudzira mamiriro muchikepe.
Mvura yegungwa inotonhodza condenser inogadzirwa neAlpaka machubhu, mhangura inoguma, uye inopesana zvachose nekukanganisa mvura yegungwa. Mvura inotonhorera uye yemahara yemugungwa ichashandiswa sechinhu chakanakira kubvisa kupisa kubva kukondesa.
Mhangura mhedziso yakavharwa nesimbi isina tsvina 316 screws.
Nzvimbo dzese dzinobata nemvura / chando chakagadzirwa nesimbi isina tsvina 316. Iyo sisitimu yese i100% anti-corrosive kumvura yegungwa / mhepo yegungwa.
Ice jenareta inoshongedzerwa nechando blade uye chando chando.
Ice blade rinocheka chando kutsemuka kuita mazaya, uyezve chando chinokwenya chinobvisa mazaya echando kubva muchando jenareta.
Ice blade uye chando chisvetuke chinoshanda pamwechete uye Ice mafrakes achabviswa 100% uye ese anowira muchando kamuri.
Evaporator yechando inogadzira pamusoro yakagadzirwa neMeridian uye Parallel mitsetse.
Mitsetse inovandudza mashandiro ekugadzirwa kwechando, uye anobatsira kwazvo kukohwa echando. Vanobvumira kuti chando chiparadze kubvisa mazaya echando ese. Ose anofamba mazaya echando anokohwa chaizvo.
Yakangwara kwazvo dhizaini yemvura yegungwa flake chando evaporator yechando inogadzira pamusoro. Inotenderwa nechikwata chedu kubvira 2009.
Yedu yemvura yegungwa flake echando michina 'yekushanda mashandiro inogara iri nani pane mamwe maChinese michina.
4. Hunhu hwakanaka iine garandi refu.
80% yezvinhu pane yangu flake echando michina ndeye epasirese anozivikanwa mabhii.SaMarine mhando Bitzer compressor, Marine shandisa XMR condenser, Marine shandisa evaporator, zvichingodaro. Yedu yehunyanzvi uye ine ruzivo rwekugadzira timu inoshandisa zvizere izvo zvakanaka zvinoriumba.
Izvo zvinokuvimbisa iwe yemhando yepamusoro flake echando michina ine yakanyanya kushanda mashandiro.
Waranti yeiyo firiji system ndeye makore makumi maviri. Kana iyo firiji sisitimu yekushanda ichiita isina kujairika mukati memakore makumi maviri, isu tinobhadhara kurasikirwa kwemushandisi.
Hatidi anodarika mazuva makumi maviri ekugadzira michina yemafake echando zvidiki pane 20T / zuva.
Hatidi anopfuura mazuva makumi matatu ekugadzira michina yechando pakati pe20T / zuva kusvika 40T / zuva.
Mutengi haamirire kwenguva yakareba kuti atore mafake echando machina mushure mekubhadhara.